Cherry iplamu ujamu akanakuqhathaniswa, ukunambitheka ngokulinganisela amnandi. Omama abaningi abasemakhaya abathanda ukupheka lo mkhiqizo namabhanisi, imiqulu kanye namaqebelengwane. Kodwa uma abekelwe amabhange bayobhaka uzothola izandla kancane zezingane, nomndeni wakho, futhi angase ayeke nama-dessert. Ngakho-ke ukufihla ujamu cherry plums, kuvuna ebusika, endaweni ethule, okungcono kude amehlo ezingane. Kodwa indlela ukupheka lokhu dish, sichaza kulesi sihloko.
inqubo enobuchwepheshe kuyinkimbinkimbi
Akubalulekile ukuba ongaphika ukuthi ukupheka ujamu - inqubo kunalokho kukhathaza. Uzoba Thenga kakhulu isikhathi, ukubekezela neziny umzamo. Nokho, umphumela uyoba idlule konke okulindelekile. Uma wenza kanjalo it right, at the ophumayo uthola enhle, uyisicukuthwane amber cherry iplamu ujamu. Recipe nesithombe sizoqhubeka. Ukuvumelana izitsha phezu okukhipha kumele ibukeke marmalade.
Yiziphi izithako ezidingayo ukuze ukupheka
Ngakho, ukulungiswa dessert esingenakuqhathaniswa, sidinga zingxenye ezilandelayo:
ophuzi plums - 1 kg,
ushukela - 1 kg;
amanzi - 200 ml.
Uma une eningi cherry iplamu, ungakwazi ukwandisa ngokuphepha ingxenye yawo wonke nengxenye noma lesibili. Uma ubheka uhlu imikhiqizo, uwayehlalise ngibuza ngididekile: kodwa ukuthi, eqinisweni, yilokho ubunzima? Nokho, iningi "ezithakazelisayo" ulinde wena kusukela ekuqaleni, at the stage of kucutshungulwa izithelo. Jam cherry iplamu ithuba okumnandi kuphela uma kwenzeka ukuthi uma ususa izithelo ngamunye emgodini futhi ususe izikhumba. Naphezu kweqiniso lokuthi iplamu kungokwalabo uhlobo lwe of iplamu, ithambo ungatholi lula kangaka, futhi ukuze balahle "engaphakathi" kuyodingeka kancane ukubilisa off. Zama ukukhetha izithelo ezivuthiwe kuphela, incike izinga ukunambitheka kokudla okukhiphayo. Kodwa engekho ezingeni izithelo kungasetshenziswa.
Ukuze uqale nge iplamu kudingekile ukuhlunga, geza phinda elisemcengezini koqweqwe lwawo. Gilazi, engeza ingilazi yamanzi kanye nendawo on umlilo omncane, imenze ngamathumba, futhi ungakhohlwa ugovuze. Izithelo okuphekwe masinyane, ngakho zibukeke usuwulungele. Manje sekuyisikhathi ukukhulula nenqwaba amathambo. Ukuze wenze lokhu, thatha ngesihlungo izimbobo ezincane, awubeka ikhanzi sitsheke iplamu, kanye juice. Hlikihla okuholela izandla mass ukuze uginindela idluliswa ngale isikrini bese bakha puree izithelo, Fluffy futhi flavorful kakhulu. It uhlala ukuphonsa itshe futhi ikhekhe, futhi ungqimba okuholela uyaphinda gqoka umlilo.
Cherry iplamu ujamu seedless: inqubo ukupheka
Ngokushesha engeza omningi esithelweni futhi ngobumnene ugovuze ngesipuni sokhuni. Beka phisa kuphela umlilo kancane, kungenjalo wena engozini bonakalise umkhiqizo. Nakuba le jam iphekwe, hhayi kude ke umzuzu ugovuze sonke isikhathi, kuba noma kunjalo akufanele awatshise. Uvele phezu Foam kumele ngokushesha asuswe. Njengoba nje ubona ukuthi ujamu cherry plums Uvarov futhi ngokuqinile uqweqwe ke sekuyisikhathi usisuse ukushisa. Shift zibe izimbiza inzalo ukudla ngomumo kumele zinikezwe ashisayo. Manje elimnandi amber ujamu kungenziwa usongwa, wasiqashisa cool bafakwa indawo ebanda.
Cherry iplamu ujamu: iresiphi nesinamoni
Ngokwesiko, sasivame zisebenzisa i-Amalungiselelo ophuzi iplamu ebusika. Nokho, ngokwemvelo, zikhona ezinye izinhlobo zawo yalesi sihlahla. Ngaphezu kwalokho, le jam obomvu cherry iplamu ngoba abapheki Uyoletha ukuvulwa. Kusukela izithelo ezincane ngokwanele ukuba zihlanzwe enkothweni kangcono ngale ndlela, njengoba thina kuveziwe iresiphi lokuqala, ngokusebenzisa ngesihlungo. Kodwa uma ungumnikazi ummese mncane futhi abukhali ekupheleleni, ungazama usike ithambo, kanye uginindela eduze. Uma uthatha 1 kg izithelo, ngemva ukususwa kwabo bonke ezingadingekile, kufanele uthole mayelana 600 amagremu komkhiqizo. Futhi manje ukumemezela uhlu oluphelele izithako ezidingekayo:
alycha obomvu (pitted) - 600 g;
ushukela - 200;
usinamoni - 1 induku.
Thatha epanini nge ngezansi obukhulu bese ubeka izithelo kusetshenzwe futhi ushukela, bese ubeka phezu nesinamoni induku. Beka ngebhakede kwi emlilweni ophansi futhi, ibangele njalo, imenze ngamathumba. Khona-ke ukunciphisa ukushisa kanye ibila, ningaphezi ukwenza, futhi ungakhohlwa ukuba ususe Foam. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo osuphelile akubanga kuncike acidification ngesikhatsi isitoreji ebusika. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu amaprotheni coiled, uthuli ahlukahlukene zingase Foam. Yingakho-ke samukelwa futhi zisuswe.
Cherry iplamu ujamu Indlela ungabona, kufanele iphekwe isikhathi eside, cishe imizuzu engu-45. Kodwa ngeke ukuvimbela ezibukwayo ukuhlolwa inqubo. Ngakho, ukuvumelana kwezincwadi ujamu kufanele kube uqweqwe obukhulu, futhi Foam isivele phezani yakha emaphethelweni epanini, uya kuphela maphakathi. Uma ekhishini yakho ine thermometer yokupheka ukuze uqiniseke ungasebenzisa futhi kule divayisi. Uma le jam cherry plums, iresiphi esikhuluma ngalo manje bakunike, ngomumo, izinga lokushisa uyonika 104 degrees.
Manje ungakwazi susa kokuqendwa dish nesinamoni induku ngokushesha ashisayo, uthele le jam ngo izimbiza inzalo okulungiselelwe. Roll up esitsheni zamabhodlela futhi ukubabuyisela sibheke phansi ithawula ekhishini. Futhi, kuze epholile, ungakwazi amboze amabhange babe ezimbili noma ezintathu amathawula ekhishini noma ingubo mncane. Tara zanikeza isikhundla salo esivamile emva Ukupholisa ephelele. ujamu okunjalo iplamu seedless ingagcinwa sikhatsi lesingaba tinyanga letisitfupha endaweni ekamelweni noma kunoma iyiphi enye indawo kokuba ekamelweni lokushisa. Futhi emva kwalesi sikhathi amabhange angasuswa endaweni ebandayo. Ngaphandle, yebo, kuze kube manje ungadli dessert.
Alycha iphathelene imikhiqizo wokwehlisa umzimba ngenxa yokuqukethwe ushukela ongaphakeme izithelo. Yingakho abantu abaningi azithandi ukudla lesi sithelo injalo iluhlaza, zikwenze uzitshele ukuthi asidi eningi kangangokuba akukho. I cherry ophuzi plums enkulu ascorbic acid, kanye obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka pectin xaxa kuqukethwe lapho futhi tannins. Lokhu kusho ukuthi ukuminyana cherry plums obomvu sikhula kakhulu ngokushesha futhi kudinga ushukela kancane.
Banana chips - esihlwabusayo futhi unempilo uswidi
Patties nge isipinashi: imithetho eyisisekelo nezindlela ukulungiswa umkhiqizo
Orange eyosiwe. iresiphi eningiliziwe izitsha yasekuqaleni
New Ford Fusion: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nencazelo jikelele
Boxer injini: ngebuhle nebubi
Cabanga ngezinto ezikhangayo ze-Yelets
Tsarskoye Selo Lyceum - esikoleni, wenyusa umbala isikhathi
Izindlela eziningana ukwenza curls usebenzisa ayina
I-Jazz: yini, yiziphi izinkomba, ngubani owenzayo